Lelee Ntuziaka Nnabata Anyị Ndenye »Mahadum Hodges
Nabata Hawks Ọdịnihu!
Nabata na Hodges U! Anyị maara ịhọrọ ịmekwu akwụkwọ gị bụ mkpebi na-atọ ụtọ, nke juputara na ajụjụ. Na Hodges U, anyị ekpuchiela gị.
Ndị nlekọta ga - ahụ maka nnabata kọleji anyị ga - enyere gị aka ịkwaga ngwa gị site na usoro nnabata. Ma ị nwere mmasị na Graduate, Undergraduate, ESL, ma ọ bụ Asambodo, anyị nọ ebe a iji nyere gị aka inweta ọtụtụ site na ahụmịhe kọleji gị.
Nzọụkwụ Mbụ bụ nke siri ike. Bido Njem Gị Taa.
Nlele Ngwa ngwa nke ntinye anyị usoro
Mezue Ngwa Gị.
Soro Onye Na-enye Gị Ndụmọdụ Banyere Gị.
Nyefee Akwụkwọ Nkwado Gị.
Nnabata, Usoro, na ndebanye aha. You're nọ nso ebe ahụ!
Chọrọ ịmụtakwu banyere nzọụkwụ ọ bụla? N'okpuru anyị ga-eje ije gị na usoro niile.
Ọchụchọ ogo ogo
1kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Nyefee Ngwa Gị
Nzọụkwụ mbụ n'ime usoro nnabata bụ itinye akwụkwọ gị. Enwere ike ime ntanetị site na ịnyefe ya ngwa ngwa ma ọ bụ site na ịga na kampos anyị na Fort Myers.
2kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Jikọọ na Nkeonwe Gị Admissions Ndụmọdụ
Ọ bụrụ na ị nyefee ngwa ngwa gị n'ịntanetị, onye ndụmọdụ gị na-anabata gị ga-akpọtụrụ gị site na ekwentị, ederede, na / ma ọ bụ email iji dozie oge iji kwurịta ọdịnihu gị na Hodges U. Enwere ike ịme mkparịta ụka a na ekwentị ma ọ bụ na mmadụ na anyị campus Fort Myers.
Ebumnuche nke mkparịta ụka iwebata bụ iji nyere gị aka ikpebi ma ọ bụrụ Mahadum Hodges bụ ihe kwesịrị ekwesị maka mkpa agụmakwụkwọ gị dị elu yana iji mekọrịta ọnụ ụzọ omenala maka agụmakwụkwọ gị na Mahadum Hodges. Ozugbo usoro a zuru ezu, ị ga-enweta ọkpụkpọ òkù na Portal obodo anyị ebe ị ga-emezue ngwa nkeonwe gị, nyefee akwụkwọ ọ bụla achọrọ, wee kwụọ ụgwọ ngwa gị.
Ọ bụrụ n ’ido onwe gị n’onwe gị tinye n’ogige ụlọ akwụkwọ, a pụrụ ijikọ usoro 1 na 2.
3kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Nyefee akwụkwọ gị
Akwụkwọ ndị dị mkpa nwere ike ịdị iche na-adabere na mmemme gị nke mmasị, akụkọ ihe mere eme, usoro ịkwụ ụgwọ, na ọnọdụ ịbụ nwa amaala. Onye na-enye gị ndụmọdụ ga-enyere gị aka ịbanye na akwụkwọ achọrọ.
Akwụkwọ achọrọ nwere ike ịgụnye:
Akwụkwọ Enyemaka Ego
Echegbula onwe anyị ga-ahụ na-enyere gị aka site na usoro akwụkwọ. Anyị na-eme ka ọ dị mfe dịka o kwere mee!
Nzọụkwụ 4 na gafere - Nnabata na ndebanye aha. You're nọ nso ebe ahụ!
Ozugbo ị mechara usoro ngwa ahụ, ị ​​ga-enweta mkpebi nnabata gị n'ime ụbọchị ole na ole. Anyị ga-akpọtụrụ gị ka ịmechaa ndebanye aha gị, wee debanye aha gị na Hodges U!
Nwee obi ike. Tinye taa.
Usoro ntinye aha pụrụ iche
Programsfọdụ mmemme chọrọ usoro ntinye aha pụrụ iche na mgbakwunye na ntinye ntinye dị n'elu. Biko lee peeji ndị dị n'okpuru maka ihe omume mmemme a kapịrị ọnụ.
TAmụ akwụkwọ PTA
BSN - Nọọsụ
Ndị Mmụta ESL
Iwu na usoro maka Mahadum Hodges gbasara Ikike na Ọrụ Ndị Mmụta na Mkpesa ụmụ akwụkwọ na -ebipụta n'akwụkwọ akwụkwọ nwata akwụkwọ, nke enwere ike ịchọta ya Ebe a.
Ọ bụrụ na nwata akwụkwọ chere na ụlọ ọrụ ahụ ejighị mkpesa ahụ nke ọma, nwa akwụkwọ ahụ nwere ike nyefee mkpesa steeti a na -esonụ:
Ụlọ ọrụ nkọwa
Ngalaba nke Education
Studentsmụ akwụkwọ mmụta anya dị anya na steeti:
Usoro mkpesa maka ụmụ akwụkwọ gụrụ akwụkwọ na-apụ na steeti na-esonye n'okpuru nkwekọrịta ikike ikike steeti (SARA), ndị dechara usoro mkpesa ụlọ ọrụ yana usoro mkpesa steeti dị, nwere ike ịrịọ mkpesa na-abụghị nkuzi na nkwekọrịta ikike ikike steeti Florida. (FL-SARA) Kọmitii Na-ahazi Nkụzi Ịga Anya Mmụta Postsecondary (PRDEC) na FLSARAinfo@fldoe.org.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara usoro mkpesa, biko gaa na Usoro mkpesa FL-SARA ibe weebụ.
Bido na #MyHodgesStory gi ta.